Caasimada Oslo Waxaad heleysaa 5,000 kr hadii aad iibsato Basakiilka Korontada Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaCaasimada Oslo Waxaad heleysaa 5,000 kr hadii aad iibsato Basakiilka Korontada
Caasimada Oslo Waxaad heleysaa 5,000 kr hadii aad iibsato Basakiilka Korontada
January 31, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Norway 0
Sannadkii 2020, Oslo waxay ku dhawaaqday inay siinayso muwaadiniinta adeegsiga baaskiiladaha korontada ku shaqeeya.
go’anka ayaa salka ku haya dhanka Cimilada waxana dad badan ay heleen lacag gaareysa 5,000 kr oo ku aadan iibsiga basakiilka korontada ku shaqeeya.
Waa maxay himilooyinka mashruucu?
1100 muwaadiniinta Oslo ah ayaa heli doona ugu badnaan 5000 kroner haddii ay iibsadaan baaskiil koronto ku shaqeeya. Muwaadiniintu way dalban karaan deeqda waxaana ka faa’ideestay dad badan inkastoo ku ekaa bisha december.
Hadafku wuxuu ahaa in si cadaalad ah loo bixiyo deeqaha lagu iibsanayo baaskiillada korontada ku shaqeeya. Oslo kommune waxay lahayd deeq tan la mid ah sanadkii 2016, laakiin qaybo ka mid ah magaalada ayaa helay aqlabiyada deeqaha.